Abakhiqizi be-Spirit Bottle & abahlinzeki - China I-Factory Bottle Factory
Ibhodlela le-vodka elibizayo i-brandy gin rum imimoya yamabhodlela engilazi
Ukuqala kwekhwalithi ephezulu, nomthengi ophakeme kuyisiqondiso sethu sokunikeza usizo olufanele kubathengi bethu. Singumkhiqizi futhi sineqoqo elikhulu lokufeza izidingo zamakhasimende ethu. Phakathi nale minyaka, sikhonza amaklayenti ethu ngokwethembeka njengekhwalithi yokuqala, ubuqotho, ukulethwa ngesikhathi, okuzuze idumela elivelele. Ngibheke phambili ekusebenzeni nawe manje!
Ukuphakama taper shape shape square high flint vodka glass bottle
I-Cap: Stopper Inkampani yethu ithobela umoya "wentengo ephansi, ikhwalithi ephezulu, nokwenza izinzuzo ezithe xaxa kumakhasimende ethu" .Inkampani yethu inethemba lokuthola intuthuko efanayo nawo wonke amaklayenti! I-JUMP yinkampani yeqembu enesipiliyoni seminyaka engama-20 egxile ekukhiqizeni okuhlukahlukene okuphakathi nasebangeni eliphakeme lokusetshenziswa kwansuku zonke kwengilazi nebhodlela lengilazi. Kutholakala esifundazweni sabavakashi abasogwini - iShanDong, njengenhloko esempumalanga yeNew Eurasian Continental Bridge, inetheku elikhulu lamazwe omhlaba jikelele eChina- QingDao Port, iJUMP inendawo eyingqayizivele ngokwendawo, okwadala izimo ezinhle zemvelo zebhizinisi lamazwe omhlaba.
Flint ohlangothini embossed logo brandy imimoya nogologo ibhodlela
Sizokwenza wonke umsebenzi onzima ukuba ube muhle futhi ube muhle, futhi sisheshise izindlela zethu zokuma ngesikhathi sezinga lamabhizinisi aphezulu asebangeni eliphakeme kanye nobuchwepheshe obuphezulu. OkweSaphulelo ibhodlela lethu lengilazi lotshwala lemimoya ecacile liyi-250ml 375ml 750ml yekhasimende. Whisky ibhodlela ingilazi ayengakwenza nge Lid, besilokhu sibheke phambili ukuthola imibuzo yakho ngokushesha. Imikhiqizo yethu ihambisana ngokuphelele nezinkombandlela ezinzima zomhlaba wonke futhi ingaqeda isitolo sakho sokuyeka ukuthenga.
I-flint emhlophe engu-750ml emabhodlela otshwala i-vodka
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende, yonke imisebenzi yethu yenziwa ngokuqinile ngokuhambisana nesiqubulo sethu esithi "Izinga Eliphezulu, Intengo Yokuncintisana, Isevisi Esheshayo" yazo zonke izingilazi zamakhasimende. Uma kunokwenzeka, sicela usithumelele izidingo zakho ngohlu olunemininingwane kubandakanya imininingwane yemininingwane nobungako obudingayo. Sizothumela amanani ethu amahle kakhulu nge-erefence yakho.
Ifektri vodka tequila ingilazi ibhodlela nge isikulufa isivalo
Siqhubeka nombono wokuthi "ikhwalithi yokuqala, umhlinzeki ekuqaleni, ukuthuthuka okungapheli nokwenziwa okusha ukuze kuhlangatshezwane namakhasimende" nabaphathi kanye no "zero defect, zero complaints" njengenhloso ejwayelekile. Isiqondiso sakho singamandla ethu angunaphakade kagesi! Wemukele ngemfudumalo amaklayenti ekhaya lakho naphesheya kwezilwandle ukuze aye enhlanganweni yethu. Sizoqhubeka nokuzinikela ekuthengiseni nasekuthuthukiseni umkhiqizo futhi sakhe isevisi ebumbeke kahle kumakhasimende ethu ukuze sakhe ikusasa eliqhakazile.
Factory Ukukhiqizwa High Quality Various Square Glass Bottle
Ukusetshenziswa Kwezimboni: I-Vodka, i-whisky, i-brandy, i-gin, i-rum, utshwala, i-spirits Base Material: Uhlobo lwe-Super Flint Sealing Type: Cork MOQ: Isitsha esisodwa se-20 '(cishe ama-12870pcs) Umbala: I-Logo ecacile noma eyenziwe ngezifiso: Isampula Lokwamukelwa Kwekhasimende Elamukelekile: Okuhlinzekiwe nge-OEM / I-ODM: Iyamukeleka
Ibhodlela le-brandy bottle whiskey
Umumo: Umbala oyindilinga noma owenziwe ngezifiso: Isampula ecacile noma eyenziwe ngezifiso: Ukupakisha okuhlinzekiwe: I-Pallet noma i-OEM / i-ODM eyenziwe ngezifiso: Isiqinisekiso sekhwalithi esamukelekayo: Ukuhlolwa okuzenzakalelayo ukuqinisekisa isikhathi sokulethwa kwekhwalithi kungakapheli izinsuku eziyi-7 uma kunomkhiqizo esitolo, uma kunesidingo kwesinye ngokuvamile ukulethwa kungakapheli inyanga eyodwa noma ukuxoxisana
Amabhodlela Wotshwala Obumhlophe Obubanzi Obumhlophe
Isisindo esiphakeme se-vodka whisky brandy gin rum amabhodlela okuphuza utshwala ajwayelekile
I-Olive Oil Bottle, Isikwele Ibhotela Lamafutha Omnqumo, Ibhodlela Lamafutha Omnqumo, 250ml Olive Oil Bottle, Imbiza Yokugcina Amafutha Olive, I-Olive Oil And Vinegar Glass Cruet,